မင်းအတွက် ဆေးတစ်ခွက် [System] - အပိုင်း (၃၀) ချီဖုန်းနှင့်ထပ်တွေ့ခြင်း - Wattpad
မင်းအတွက် ဆေးတစ်ခွက် [System]
အတွဲ (၁) အပိုင်း (၁) System က Host ကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း
အပိုင်း (၂) ​သေ​လောက်​သည့်​မစ်​ရှင်​
အပိုင်း (၃) ​ရှေ့ခရီးလမ်းကရှည်​လှတယ်​
အပိုင်း (၄) 'ချီ' အိမ်တော်မှထွက်ပြေးခြင်း
အပိုင်း (၅) ချန်းယွင်မြို့တော်
အပိုင်း (၆) ​ထောက်ပံ့သူကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း
အပိုင်း (၇) ကုန်းရိထျန်းဟန်
အပိုင်း (၈) ​ရောဂါ
အပိုင်း (၉) သတင်းကောင်း
အပိုင်း (၁၀) ​ဆေးဝါးသန့်​စင်ခြင်း
အပိုင်း (၁၁) ကုကျိုး၏စွမ်းရည်
အပိုင်း (၁၂) ​ကြောက်စရာကောင်းသည့်ဆေး
အပိုင်း (၁၄) ကုန်းရိအိမ်တော်သို့သွားခြင်း
အပိုင်း (၁၅) ကုန်းရိအိမ်တော်
အပိုင်း (၁၆) မျိုးနွယ်စုတိုက်ပွဲ
အပိုင်း (၁၇) အားကျိုး၊ သေချာကြည့်ထား
အပိုင်း (၁၈) ​ထောက်ပံ့သူ၏ အနီးကပ်သင်တန်း
အပိုင်း (၁၉) တိုးတက်သွားသောကျင့်ကြံရေးနည်းလမ်း
အပိုင်း (၂၀) အိမ်​တော်သခင်လေး(၄)ဦးထွက်ပေါ်လာခြင်း
အပိုင်း (၂၁) ထုံးထျန်းမျက်လုံး
အပိုင်း (၂၂) ပြိုင်ပွဲ၏ရလဒ်
အပိုင်း (၂၃) နဂါးပြာရေကန်
အပိုင်း (၂၄) မစ်ရှင်အသစ်
အပိုင်း (၂၅) ဖွင့်ဟဝန်ခံခြင်းနှင့် မှန်းဆတွေးတောခြင်း
အပိုင်း (၂၆) အရိုးပုလဲ
အပိုင်း (၂၇) ​ဆေးလုံးများကို အကဲဖြတ်ခြင်း
အပိုင်း (၂၈) နဂါးပြာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း
အပိုင်း (၂၉) လေလံပွဲ
အပိုင်း (၃၀) ချီဖုန်းနှင့်ထပ်တွေ့ခြင်း
အပိုင်း (၃၁) အသေးစားလှည့်ကွက်
အပိုင်း (၃၂) ဆန်ကုန်မြေလေးများ၏သတင်း
အပိုင်း (၃၃) ကုကျိုး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်
အပိုင်း (၃၄) ​ရွှေသားလက်မှတ်များ
အပိုင်း (၃၅) ပွဲကြီးပွဲကောင်း
အပိုင်း (၃၆) အကူအညီလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း
အပိုင်း (၃၇) လျှာလည်စေသောဟင်းပွဲ
အပိုင်း (၃၈) အမဲလိုက်ခြင်း
အပိုင်း (၃၉) ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းသဘာဝလောက
အပိုင်း (၄၀) ဇီဝမရဏကြိုးဝိုင်း
အပိုင်း (၄၁) ​လောင်းကြေးထပ်ခြင်း
အပိုင်း (၄၂) လောင်းသမျှ အနိုင်ရခြင်း
အပိုင်း (၄၄) ဆေးလုံးများကိုရောင်းဝယ်ခြင်း
အပိုင်း (၄၅) ကြီးမားလှသည့် တိုးတက်မှု
အပိုင်း (၄၆) ခေါင်းကိုမိုးကြိုးပစ်ခံရခြင်း
ကုကြိုး - မငျးမှာ ရောဂါရှိလား? ကုနျးရိထနျြးဟနျ - မငျးမှာ ဆေးရှိလား? ကုကြိုး - မငျးမှာ ရောဂါရှိနတောပဲ! ကုနျးရိထနျြးဟနျ - ရောဂါရှိတော့ မငျးကကုနိုငျလို့လား? ကုကြိုး - ကုနိုငျတယျဆို မငျးလိုခငျြလား! ကုနျးရိထနျြးဟနျ - မငျးမှာရှိသလောကျ ငါလိုခငျြတယျ ကုကြိုး...
#adventure #alchemy #bl #comedy #cultivation #romance #shounenai #system #translation #xianxia
742 220 14
ကုကျိုးသည် ထောက်ပံ့သူက ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုး အတိအကျ ပြောနိုင်ရသလဲဆိုတာကို မသိပေ။ သို့သော် သူက ထိုအကြောင်းကို စဉ်းစားပြီး မမေးမြန်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ပထမအချက်က သူစားနေသော အစာပြေမုန့်များက အလွန်အရသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး သူပါ အချက်အပြုတ်ပညာတချို့ကို နည်းနည်းလောက် လေ့လာချင်သွားသည်။ ဒုတိယအချက်က သူ့ထောက်ပံ့သူ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကိုင်ပုံကို သူ အကြမ်းဖျင်းနားလည်ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့သူက သူ့ကို စပြီး မရှင်းပြဘူးဆိုမှတော့ သူအနေနှင့် ကိစ္စများသူ့အလိုလို ဖြစ်လာသည်ကိုသာ ဘာမှမပြောဘဲ စောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ဒီတော့ သူ စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် သေ​သေချာချာ စောင့်ကြည့်ရမည်။
သိပ်မကြာခင်တွင် လေလံပွဲကို တရားဝင်စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။
လုံရိက သူတို့၏အရှေ့တွင်ရှိသော အဝတ်ကြိုးစ ကန့်လန့်ကာကို ဆွဲချလိုက်တော့ အလွန်ကြီးမားကြည်လင်သော မှန်ပြတင်းတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာသည်။ မှန်သား၏ အရောင်ကား အမြင်မှလှမ်းကြည့်လျှင် အထဲကိုမမြင်နိုင်ဘဲ အထဲကနေ အပြင်ဘက်ကိုသာ ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်သည်။
ခန်းမ၏ အရှေ့ဆုံး၌ ကျောက်သားစင်မြင့်ကြီးတစ်ခု မြင့်တက်လာပြီး ထိုစင့်မြင့်ထက်တွင် သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် ချီသွေးကြောငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်း အဆင့်(၃)ရှိသည့် သိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက် ရှိနေသည်။
ထိုသူက လေလံပွဲ၏ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်သည်။
ထို့နောက် သူက လက်ခုပ်သံအချက်ပေးလိုက်သည့်အခါ သူ့အနောက်မှ တစ်ဒါဇင်မကသော ချောမောလှပသည့် မိန်းမပျိုလေးများ တန်းစီထွက်လာကြသည်။ ထိုမိန်းမပျိုလေးများ၏ လက်ထဲတွင် ဗန်းတစ်ခုစီသယ်လာပြီး ထိုဗန်းများကို ဇာပန်းများထိုးထားသည့် ပိုးပဝါစများဖြင့် အုပ်ထားကာ ဗန်းထဲမှ ပစ္စည်းများက ထိုပဝါပါးအောက်တွင် လုံခြုံစွာ ကွယ်ပျောက်နေကြသည်။